Metmetçiğe Bir Selam Da Kayseri Ulaşım A.Ş'den | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး38 KayseriKayseri Transportation Inc. မှMetmetçiğအားကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သည်။
19 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 38 Kayseri, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, တူရကီ 0
kayseri အတွက်နှုတ်ခွန်းဆက်မှု metmetcige
Metmetçığahello Kayseri Transportation Inc မှ အပြောင်းအလဲမစတင်ခင်နိုင်ငံတော်သီချင်းကိုဖတ်ပြီးစစ်ဆင်ရေး၏ငြိမ်းချမ်းရေးနွေ ဦး ကိုထောက်ခံသည်။
KAYEREK ၏မြို့တော်မြူနီစီပယ်အတွင်းရှိလူငယ် KAYMEK ၏ပံ့ပိုးမှုအရ Kartal အာဇာနည်သင်္ချိုင်းသို့သွားပြီးMehmetçikသို့မက်ဆေ့ခ်ျများရေးသားခြင်းအားဖြင့် Kartal Spring Cemetery သို့အကူအညီတောင်းပြီးနောက် Ulasim AS မှအထောက်အပံ့ကိုလည်းပေးခဲ့သည်။ န်ထမ်းများထံမှလာ၏။ အဆိုင်းမစတင်ခင် Ulasim သည် National Anthem ၏တတိယတိုက်ကြီးကိုစုပေါင်းဖတ်ခဲ့သည်။ ၀ န်ထမ်းများကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြီး "Mehmetçiğimizimizဘက်မှ" ပြောကြားခဲ့သည်။
Metropolitan မြူနီစီပယ်၏ကုမ္ပဏီများမှတစ်ခုဖြစ်သော Transportation Inc. မှ Peace Spring Operation ကိုသိသာထင်ရှားသောအထောက်အပံ့တစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc. ၀ န်ထမ်းများကအပြောင်းအလဲမစတင်မီစစ်သားများကိုနှုတ်ခွန်းဆက် သ၍ နိုင်ငံတော်သီချင်း၏တတိယတိုက်ကြီးကိုဖတ်ကြသည်။
တိုင်ရာတောင်တွေ၊ ငါဟာကျယ်ပြန့်တဲ့နေရာမှာမနေဘူး၊ ငါသယ်တယ်” ဝန်ထမ်းများ၊ “ Peace Spring Operations Inc. မှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။ ကျနော်တို့အဖြစ် "Mehmetçikimizအနားမှာရပ်နေ၏။
YHT ပုဂ္ဂိုလ်များသတိပေးချက်ရပ်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနားလည် 06 / 07 / 2014 YHT personeli dur uyarısını selam anlamış : Hassas ölçüm aletlerinin bulunduğu Piri Reis lokomotifinin kazadan 1-2 dakika önce yanından geçen bir lokomotifteki personel tarafından uyarılmaya çalışıldığı öğrenildi. Önce el sallayarak…
TCDD ခြိမ်းခြောက်မှုစာချုပ်, အလုပ်ဝင်ပါလိမ့်မယ်သူတွေကိုတောင်းခံရ7တစ်နှစ်အလုပ်ကတိကဝတ် 22 / 09 / 2012 TCDD7နှစ်အလုပ်ကိုကတိပြုလိုသူအားအလုပ်လျှောက်လိုသူများထံမှတောင်းဆိုသည်။ အစောပိုင်းလျော်ကြေးပေးလိမ့်မယ် လျှောက်လွှာပုံစံတွင် TCDD သည်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဖြစ်သည့် dernek အသင်းအဖွဲ့များနှင့်၎င်းတို့အသင်းဝင်များကိုလည်းမေးမြန်းပြီးစုဆောင်းမှုအပေါ်တရားမ ၀ င်စည်းကြပ်မှုများပြုလုပ်သည်။
လွမ်းဆွတ်ဓါတ်ရထား Bursa အလုပ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး 26 / 10 / 2012 Vatandaşların bayram hazırlıklarına tüm hareketliliğiyle eşlik eden Cumhuriyet Caddesi istediği rağbeti göremiyor. Yapılan tüm iyileştirmeler, alt yapı çalışmları ve revizyon çalışmaları halkı caddeye çekmeye yetmiyor. Cadde esnafları, Ramazan Bayramı’nın Kurban…
ပြင်သစ်တွင်အာဖရိကန်မြန်နှုန်းရထားန်ထမ်းများ၏ပျက်ကွက်ဟုမေးခဲ့သည် 16 / 04 / 2013 ပါရက်သည်ပြင်သစ်သို့အလည်အပတ်ခရီးတွင်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နေသောအာဖရိကသားများကိုမူလုလမန်မွတ်စလင်မ်ဖြစ်လို့အလုပ်မလုပ်ရန်တောင်းဆိုခံရသည့်ပြင်သစ်ရထားကုမ္ပဏီ SNCF ၏ဥက္ကPresident္ဌဖြစ်သည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီအမြေအောက်ရထားအတွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရသည့်အခွံမာသီးများတွင်အလုပ်စတင် 01 / 03 / 2015 Metroda yaralandı İBB şirketinde işe başladı :Seyrantepe Metrosu’nda kalçasına demir profil saplanan güvenlik görevlisi Fatih Çoban, metroyu işleten İBB şirketlerinden Ulaşım AŞ’de işe başladı. Seyrantepe’de oturan güvenlik görevlisi Fatih Çoban,…